Umbulali Uphendule Izisulu Zaba AmaBurger - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UKiller Uphendule Izisulu zaba amaBurger
UKiller Uphendule Izisulu zaba amaBurger
by UPiper St. James October 27, 2019
by UPiper St. James October 27, 2019 5,161 ukubukwa
Umbulali wokuziphindiselela uJoe Metheny waqala ulaka olwandayo ngenkathi unkosikazi wakhe ethatha ingane yabo wabaleka ekhaya eBaltimore, eMaryland. Le kwakuyinhlansi eyakuqala konke.
Ngenkathi eboshwa uMetheny ngo-2016 wavuma amacala akhe, wasola nesidingo sakhe sokuziphindiselela kunkosikazi wakhe nendoda ayemshiyele yona. Kodwa-ke, yile ntukuthelo eyadala futhi yondla okuthile okujulile ngaphakathi kuye.
Ngenkathi intukuthelo ibhebhezela ukuthunywa kwakhe, uMetheny wahlangabezana nezisulu eziningi ezazithola nje seziwela indlela yakhe empilweni. Njengendawo yokukhipha ulaka nentukuthelo ngokushiywa kwakhe muva nje, indoda ebikade ijabule idinga ukuthukuthela ngolaka lwayo; futhi leyo ndawo kwakuwukubulala, ukudlwengula nokuhlukanisa amalungu omzimba.
Iningi lalaba besilisa nabesifazane okwenzeke ukuthi bazithole besendaweni engafanele ngesikhathi esingesihle kwakungabaqaphi, abantu abangenamakhaya nezifebe. Abantu akekho ozobona ukuthi bahambile noma abalahlekile.
Lokhu kungazwakala kufana nezindaba owake wazizwa esikhathini esedlule, kodwa okuhlukanisa uMetheny nombulali wakho “ojwayelekile” ukuthi uzilahla kanjani izidumbu zezisulu zakhe ezingalindele.
UMetheny waquma izitho zomzimba wabo, waqoqa inyama nenyama yabo, wakuxubanisa nenyama yengulube nenkomo ayisebenzisa ukwenza ama-hamburger. Ube esethengisa lawa ma-hamburger endaweni yakhe eseceleni komgwaqo.
Umbulali uthi izidumbu zazinokunambitheka okufanayo nenyama yengulube. Uthe "Uma uyixube [nenyama ewumhlabathi] akekho ongawubona umehluko." Eqinisweni, akukaze kube nomthengi oyedwa, nomthengi wamacala akhe, owake wakhononda ngokunambitheka kwesidlo sabo.
Ngokuqondene nezingxenye zezidumbu ezazingalungele umsizi we-hamburger, uMetheny wazingcwaba elolini.
Kubonakale ukuthi ubugebengu bakhe bebungasaziphindiseli. Esikhundleni salokho, lapho ifriji likaMetheny seliphansi wayephuma ayofuna omunye umphefumulo ompofu waleso sithako esikhethekile kuma-hamburger akhe ayewasebenzisela amakhasimende akhe. Wabonakala enokuthanda ngempela ukubulawa kwakhe.
Ngesikhathi eboshwa wayesethi ubulale abantu abayishumi. Utshele iziphathimandla ukuthi: "Ukuphela kwento engizizwa kabi ngayo kunoma yikuphi kwalokhu ukuthi angizange ngikwazi ukubulala omama ababili engangibalandela, futhi yilowo wesifazane owayekade exhumekile."
UMetheny wachitha iminyaka engaphansi kweshumi ejele ngemuva kokuthola odilikajele ababili ngaphandle koshwele ngokubulala uKathy Spicer noCathy Ann Magaziner.
Ngo-2017 watholakala eseshonile esitokisini ngunogada wasejele. Wayeneminyaka engama-62 ubudala.